पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री सरिफ सोमबार उपचारक...
केही समयदेखि सख्त बिरामी हुनुभएका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ थप उपचारका लागि भोलि (सोमबार) लण्डन जानुहुने भएको छ ।
Suvadin Media 115 0
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री सरिफ सोमबार उपचारका लागि लण्डन जाने
चिकित्सक अभावले सास्ति खेप्दै विरामी
कर्मचारी समायोजनको सकस चलिरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक अभाव देखिएको छ ।
Suvadin Media 163 0
डा. केसीको अनसन पाँचौं दिनमा, स्वास्थ्य जटिल बन्दै
मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसंग असुल गरेको बढी रकम फिर्ता लगायतका माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसी पाँच दिनदेखि डडेलधुरा सदरमुकाममा अनशन बसिरहेका छन् ।
Suvadin Media 130 0
के कारणले हुन्छ पिसाबको संक्रमण, यस्ता छन् लक्षण र...
सामान्यतया मानिसको पिसाब कीटाणुरहित हुनुपर्छ । माइक्रोस्कोपिक परीक्षणका क्रममा पिसाबमा कीटाणु देखिएमा वा कल्चर गर्दा अत्यधिक मात्रामा कीटाणु भेटिएमा त्यसलाई पिसाबमा भएको संक्रमण भन्ने गरिन्छ । मानव...
Suvadin Media 220 0
के कारणले हुन्छ पिसाबको संक्रमण, यस्ता छन् लक्षण र उपचार विधि
के सरकारले डा. केसीका मागको सम्बोधन गर्ला ?
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत चिकित्सा शिक्षा सुधारक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले डडेल्धुराबाट १७औं सत्याग्रह सुरू गरेका छन्।
काठमाडौं । राजधानीसँगै देशभरको चिसो बढेसँगै सर्वसाधारणले शरीरको सुरक्षाका लागि न्यानो कपडा किन्‍न थालेका छन् । तातो खानेकुरामा जोड दिन थालेका छन् । मौसम परिवर्तनका कारण ज्वरो, रुघाखोकी, दम, झाडापख...
Suvadin Media 113 0
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. भगवान कोइराल...
सरकारले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. भगवान कोइरालालाई नियुक्त गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. कोइरालालाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. भगवान कोइराला नियुक्त
स्वास्थ्य चौकीमै गयो सुत्केरीको ज्यान
त्रिवेणी नगरपालिकास्थित छतारा स्वास्थ्य चौकीमा एक सुत्केरीको निधन भएको छ । सुत्केरी भएको ६ घण्टा पछि ३७ वर्षीया रेजीया नेपालीले स्वास्थ्य चौकीमै देहलिला त्याग गरेकी हुन् ।
चितवन मेडिकल कलेजले गत शैक्षिकसत्रका एमबीबीएस र बिडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क समायोजन गर्ने जनाएको छ । आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कलेजले बढी लिएको शुल्कको हिसाब गरी समायोजन गर्...
Suvadin Media 134 0
चितवनमा डेंगुको संक्रमणबाट एक जनाको ज्यान गयो
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले डेंगुको संक्रमणबाट जिल्लामा थप एकको मृत्यु भएको जनाएको छ । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत ३१ वर्षीया एक महिलाको मृत्यु भएको हो ।
Suvadin Media 124 0
काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले स्नातकोत्तर तहको एमडी-एमएस-एमडीएमएसको प्रवेश परीक्षा यही कात्तिक ९ गते सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनस...
Suvadin Media 162 0
थकानबाट राहत पाउन के गर्ने ?
बीबीसी । विश्वभरका पाँच मध्ये एकमा असाधारण थकाइको समस्या हुने गरेको छ भने दशजनामा एकलाई बिना कुनै विशेष कारण लामो समयसम्म शरीरमा ऊर्जा नभएको जस्तो महसुस हुने गरेको पत्ता लागेको छ । यसबारेमा नयाँ अनुसन...
Suvadin Media 133 0
स्तन क्यान्सरविरुद्ध 'वाकथोन' सम्पन्‍न
काठमाडौं । पछिल्लो समय बढ्दै गएको स्तन क्यानसरका विषयमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले 'वाकथोन' गरिएको छ । बदलिँदो जीवनशैली, अस्वस्थकर जिवनयापन, बदलिँदो यौन जीवन तथा विभिन्‍न खाले औषधिहरुको प्र...
Suvadin Media 265 0
माइन्ड फुलनेस मेडिटेसन के हो ? यसका फाइदा ?
माइन्ड फुलनेस मेडिटेसन एक प्रकारको ध्यानको अवस्था हो । जहाँ हामी पूर्ण रूपमा वर्तमानमा जागरुक भएर बस्छौँ । भूत र भविष्यका कुनै पनि कुरा नसोचेर वर्तमानमा रहने प्रयास गर्छौं। मन, भावना र विचारमा आएका कु...
Suvadin Media 132 0
टिचिङलाई तेस्रो पटक पनि कलेजो प्रत्यारोपणमा सफलता
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले तेस्रो पटक सफलताका साथ कलेजो प्रत्यारोपण गरेको छ ।
अल्कोहलले कलेजोमा के असर गर्छ ?
कलेजो शरीरभित्रको दोस्रो ठूलो अंग हो । कलेजोले शरीरमा ऊर्जा भण्डारण गर्ने, खाना पचाउने, विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । यसले शरीरमा पाँच सयभन्दा बढी फरक–फरक काम गर्छ । कलेजोले प्रोटिन,...
अफिसमा काम गर्ने महिलामा मोटोपनको समस्या, यसरी रहन...
एजेन्सी । स्वास्थ्य सम्बन्धी एक संस्थाले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार घरबाहिरको काममा सक्रिय हुने महिलाहरु धेरै मोटोपनको शिकार हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यो अध्ययन भारतिय कामकाजी मह...
Suvadin Media 126 0
अफिसमा काम गर्ने महिलामा मोटोपनको समस्या, यसरी रहन सकिन्छ फिट
कात्तिक २ र ३ गते भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइने
सरकारले आगामी कात्तिक २ र ३ गते देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाउने भएको छ ।
Suvadin Media 161 0
शाकाहारी भोजन : फाइदा कि बेफाइदा ?
एजेन्सी । शाकाहारी भोजनका कारण इनर्जी कम हुन्छ भन्ने धारणा पाइन्छ । अर्कातिर शाकाहारी भोजन मांशाहारीका तुलनामा निकै उत्तम र स्वास्थ्य बर्धक मानिन्छ । शाकाहारी खाना मुटुका बिरामीको समस्यालाई क...
Suvadin Media 123 0
विश्‍वमा २५ प्रतिशत मानिसलाई मानसिक रोग, 'उपचार गर...
काठमाडौं । मानसिक तनावका थुप्रै कारणहरू छन् । हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो अवस्थालाई कसरी लिन्छौ। त्यो चिजसँग हाम्रो तनाव निर्धारित हुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई एउटा घट्नाले तनाव दिन सक्छ भने अर्कोलाई नदिन सक्छ।...
विश्‍वमा २५ प्रतिशत मानिसलाई मानसिक रोग, 'उपचार गरे निको हुन्छ'
किन हुन्छ कब्जियत ?, यस्ता छन् लक्षण र बच्‍ने उपा...
एजेन्सी । कब्जियत पाचन प्रक्रियामा गडबडीका कारण हुने एक रोग हो । मल निष्कासनको स्वभाविक आवृत्तिमा ढिलाई हुनु, सरल तरिकाले मल त्याग गर्न नसकी बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु वा दैनिक एकपटक पनि सजिलोसँ...
Suvadin Media 180 0
किन हुन्छ कब्जियत ?, यस्ता छन् लक्षण र बच्‍ने उपाय
महाकाली अस्पतालमा २८ दरबन्दी, सेवा दिने चिकित्सक द...
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १८ मा रहेको महाकाली अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव भएको छ । दरबन्दीका चिकित्सकको पदपूर्ति नहुँदा बिरामीलाई अन्यत्र ‘रिफर’ गरिदैँ आएको छ। चिकित्सककै अभावमा बिरामीले भारतीय निजी...
Suvadin Media 114 0
महाकाली अस्पतालमा २८ दरबन्दी, सेवा दिने चिकित्सक दुई मात्र
रसुवा । तातोपानी गाउँपालिका–८ बाँरागाउँकी १८ वर्षीया मुगा रावत कक्षा ७ मा पढ्छिन् । गाउँकै जनजागृति आधारभूत विद्यालयमा पढ्ने मुगालाई महिनावारी भएको अवस्थामा विद्यालयको मूलढोका भन्दा अगाडि जानसक्...
स्वास्थ्यका लागि रातोभन्दा सेतो मासु उपयुक्त
नेपालीहरू खानपिनमा सौखिन हुन्छन् । यतिवेला देशमा चाडवाडको सिजन चलिरहेको छ । दसैं आगनीमै छ । नेपालीहरूका लागि दसैंमा झनै खनपिनको महत्व हुन्छ । प्राय हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका घरमा दसैंमा मासु पाक्ने गर्छ...
दसैंमा के खाने, कसरी खाने ?
हिन्दू धर्मावलम्बीको महान् पर्व दसैंको रौनक देसैं भरी छाएको छ । दसैं आएसँगै सबैको मनमा हर्षोल्लास छाएको छ । विभिन्‍न कामको शिलशिलामा बाहिर रहेकाहरू पनि घर गइरहेका छन् । वर्ष दिनमा आउने पर्वमा सबै घरका...
Suvadin Media 135 0
त्रिविको उपकुलपतिका लागि डा. भगवान कोइरालाको नाम स...
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि बरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला सिफारिस भएका छन्।
Suvadin Media 152 0
त्रिविको उपकुलपतिका लागि डा. भगवान कोइरालाको नाम सिफारिस
जिल्लाका अस्पतालहरुमा साउन महिनायता उपचार गर्न आएका दुई हजार ४६ जनामा डेंगुको सङ्क्रमण देखिएको छ । छ हजार ६३९ जनाको नमूना परीक्षण गरिएकामा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिएको हो ।
Suvadin Media 147 0
के हो डेन्टल फोबिया र कसरी उपचार गर्ने
काठमाडौं । दाँतसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिले उपचारका लागि दन्तचिकित्सककहाँ जान डराउनुलाई डेन्टल फोयिबा भनिन्छ । नेपालमा डेन्टल फोबिया धेरैमा देखिने गर्छ, विशेषगरी बच्चाहरूमा । केही वयस्क र व...
Suvadin Media 128 0
'डेङ्गु नियन्त्रणका लागि सरकारको मात्रै मुख ताक्न...
महामारी बनेको डेङ्गु नियन्त्रणका लागि पूर्वउद्योगमन्त्री तथा सांसद महेश बस्नेतले सरकारको मात्रै मुख ताक्न नहुने बताएका छन्। मध्यपुरथिमि नगरपालिका–६ स्थित कमेरोटारका छ सामुदायिक संस्थालाई आज डेङ्गु निय...
'डेङ्गु नियन्त्रणका लागि सरकारको मात्रै मुख ताक्नु हुँदैन'
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले १६औं पटक अनसन बसिसकेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक-पटक सत्याग्रह गर्दासमेत उनका माग पुरा हुन सकेका छैनन् ।